APMF Morondava: botry ny 90 % miantoka ny fitaterana an-dranomasina | NewsMada
APMF Morondava: botry ny 90 % miantoka ny fitaterana an-dranomasina
Nanomboka ny taona 2016, manarina tsikelikely ny seranan-tsambo ao Morondava ny APMF*; ny volana marsa 2017, lasa seranam-paritra i Morondava, iombonana amin’i Maintirano, i Beloa ambonin’i Tsiribihina, i Belo sur Mer, ary i Miandrivazo (seranana ony). Miantoka ny fitaterana an-dranomasina be indrindra amin’io seranam-paritra io ny botry.
Navadika ho seranam-paritra i Morondava izao noho ny faritra miantoka ny fitaterana mianavaratra andrefana sy mianatsimo andrefana, miampy ny any Miandrivazo, fitaterana an-dranomamy. “Vitsy izahay mpiasa teo aloha fa ankehitriny, efa miampy izany, mandrindra ny asa rehetra. Botry ny 90 % miantoka ny fitaterana, miampy ireo sambo mpanjono an’ny orinasa Sopemo”, hoy ny talem-paritry ny APMF, i Botou Mavil Franclaire.
Mitaky fanajariana goavana ny seranan-tsambo any an-toerana satria tototra ny lakandrano miditra eo amoron’ny seranana. Tsy tafiditra ireo sambo vaventy. “Efa nisy tetikasa nanadio lakandrano natao any Miandrivazo, ny taona 2017, noheverina hotohizana eto Morondava, saingy tsy nahomby izany, ary izao mbola hita amin’ny endriny ankehitriny izao ny seranan-tsambo”, hoy ny talem-paritra. Eo ambany fiahian’ny minisiteran’ny Fitaterana ny APMF ka tokony hatao laharam-pahamehana ny fanajariana ny seranan-tsambo maro amin’ny maha Nosy ny tanintsika.
Betsaka ireo vokatra miditra sy mivoaka
Betsaka ireo vokatra taterin’ny botry miditra sy mivoaka avy ao Morondava, ohatra, ny sira avy any Belo sur Mer mamatsy ny ampahany be indrindra manerana an’i Madagasikara ; ny trondro maina ; ireo vokatra fampiasa andavanandro ; ny zava-pisotro Star, sns, miainga avy eo Morondava ho an’ny morontsiraka andrefana maro. Botry iray, mahazaka entana 15 t hatramin’ny 40 t.
Kely ny vola miditra amin’ny APMF
“Olana anefa, toa samy maka ho azy ireo botry ireo, tsy mivondrona anatin’ny kaoperativa, toy ny mpitatitra an-tanety. Olana ihany koa ny fanaraha-maso ny jono, ary kely ny vola miditra amin’ny APMF, tsy ampy hanamboarana ireo trano simba sy asa hafa. Adidinay kosa ny misakana raha ratsy ny andro, mandefa filazana amin’ny radio anefa izahay, itakiana vola amin’izany filazana izany. Koa mangataka izahay mba ho maimaimpoana ny filazana momba ny toetr’andro ho tombontsoan’ny rehetra”, hoy i Botou Mavil Franclaire.